I-13 yamaphephadonga amangalisayo kunye nemizobo eludongeni - Iindonga
I-13 yamaphephadonga amangalisayo kunye nemizobo eludongeni
Iifoto zodonga kunye nemizobo eludongeni yindlela eyonwabisayo kunye nobuchule yokuyila igumbi, kodwa ezi zikhangeleka ziyinyani kwaye ziya kushiya iindwendwe zakho zisamangaliswa kangangeeyure. Bhrawuza kule galari- inyanzelekile ukuba ikunike inkuthazo yodonga.
amagumbi amancinci ayila izimvo
Gcina usesikhathini kunye neengcamango zethu ezikhuthazayo, ukujonga kwangoko, amakhaya obomi bokwenene kunye neengcebiso zeengcali ngokusayinela ileta yethu yasimahla…
Jonga igalari 13Iifoto IIPHEPHA 1Kaninzi '13Zezityalo
Ekuboneni kokuqala sasicinga ukuba lo ngumzobo omkhulu, kodwa olu donga ludonga lweentyatyambo zaseTropiki alupheleli nje kwindlela kodwa luhle ukujonga. Nokuba uncanyathiselwe ezindongeni zegumbi lakho lokuhlala okanye kwigumbi lokulala, ukuprinta okumnandi kwamagqabi kuya kuzisa indawo yakho ebomini ngelixa usongeza into yokwenyani yobunkunkqele.
Udonga lwaseBotany eludongeni, ndwendwela i-PIXERS ngamaxabiso
Iphepha lodonga lodongaImifanekiso kaGetty MbiniKaninzi '13Enegqabi eneenkcukacha
Uyilo oluneenkcukacha, oludlamkileyo olusuka Iphepha lodonga lodonga ibonisa igqabi eliluhlaza eliqaqambileyo phantsi kwemicroscope. Lo mboniso uguqula intloko ngowenkalipho kunye nobugorha, kodwa ngekhe ujongeke kwindawo yangasese yangoku.
Eneenkcukacha Igqabi Wall eludongeni, ukusuka kwi- £ 25.00 m², iMurals Wallpaper
Iphepha lodonga lodonga 3Kaninzi '13UkuLwandlekazi
Ukuba ufuna ukwenza indawo epholileyo, sukujonga phambili. Uyakuphupha ukuba ubukwisiqithi kwenye indawo, ujonge kulwandle oluhlaza okwesibhakabhaka, ubukele amaza kwaye uziva umoya opholileyo. Ngaba uphupha ngoku?
I-Ocean Ripple Wall eseludongeni, ukusuka kwi- £ 25.00 nge-m², kwiMurals Wallpaper
Debbie McKeegan 4Kaninzi '13I-Sawn Wood Slats
Ezi slats zokhuni zisarha ziya kongeza ukuziva okwangoku kulo naliphi na igumbi. Ukuba bebenyanisile bebeya kulungela umgangatho nawo!
Iphepha lodonga leSawn Wood Slats, ndwendwela uDebbie McKeegan ngamaxabiso
IIPHEPHA 5Kaninzi '13Inyamakazi
Ngaba leyo yinyamakazi enkulu egumbini lokulala? Ngokuqinisekileyo enye yabathandi bezilwanyana, olu donga lubonakalayo lomtsalane yindlela elungileyo yokongeza isandi esimibalabala nakweliphi na igumbi.
I-Chameleon Wall eseludongeni, ndwendwela ii-PIXERS ngamaxabiso
imibala yegumbi epholileyo kubafana
Iphepha lodonga lodonga 6Kaninzi '13IVelvet
Ukuba oku bekuyinyani ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo besiza kuyiphulula imini yonke! Ukuzola ukujonga umbulelo kubusuku bayo obunombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nefreyimu yokuhombisa ye-velvet, le lodonga iya kongeza into yobunkunkqele ekhayeni lakho.
IVelvet yoLwakhiwo lodonga lwaseludongeni, ukusuka kwi- £ 25.00 nge-m², kwiMurals Wallpaper
UGraham kunye noBrown 7Kaninzi '13Ubuncinci beDonga
Lo mzobo umangalisayo uza kwenza udonga olubonakalayo. Uyilo lwe-monochromatic ludlala ngeemvakalelo kwaye luya kuhlala lumangalisa iindwendwe zakho. Nantsi ithemba lokuba akukho mntu uzama ukuhamba kuyo!
I-infinity Wall Mural, i- $ 51 ngeroli nganye, uGraham noBrown
Photowall 8Kaninzi '13ILITSHI ELIMATSHA
Olu donga ludonga lwamatye lukholisa ngokumangalisayo. Ngubani ofuna iitafile ezimabhile xa kukho udonga olujongeka lulungile?
I-Marble Stone Wall, ukusuka kwi- £ 26 / m², kwi-Photowall
imibala yepeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka
Iphepha lodonga lodonga 9Kaninzi '13UIvy
Wakhe wacinga ngokudala igadi yangaphakathi? Kulungile lo mfanekiso mhle wogqunywe ngodonga ungenza iqhinga. Uyilo olunzulu lwe-ivy oluhlaza lubukeka luhle kwaye luya kuba yinto efanelekileyo yokugqibezela kulo naliphi na igumbi lokuguqula ikhaya lakho libe ngcono.
I-Ivy eValiweyo i-Wall Mural Wallpaper, ukusuka kwi- £ 25.00 nge-m², kwiMurals Wallpaper
Iphepha lodonga lodonga 10Kaninzi '13Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe
Oku kudityaniswa kokucocekileyo kujongeka njengokuvalwa kwexesha lethu lokutsiba ebusika, kwaye uboya bujongeka bunombala kwaye buchaze ukuba uya kucinga ukuba ungabunxiba. Ukuhonjiswa ngetoni eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neetoni ezimhlophe zesilivere, olu donga ludongeni aluyi kusilela ukuguqula ikhaya lakho.
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe onzima weJumper Mural, ukusuka kwi- £ 25.00 nge-m², kwiMurals Wallpaper
Ukuqokelelwa kweGI / iPhotowall Shumi elinanyeKaninzi '13I-HoneyYCOMB ISISEKO ESIMISELWEYO
Le yindlela entle yokungenisa ngaphandle. Ukudala indawo ekugxilwe kuyo kulo naliphi na igumbi, kunzima ukukholelwa ukuba oku akuyonyani. Sisacinga ukuba singahamba siqonde ngqo eludongeni siphathe amatye.
Ubusi obunepateni yodonga lwe-basalt, ukusuka kwi- £ 29 / m², ingqokelela ye-GI e-Photowall
Iphepha lodonga lodonga 12Kaninzi '13Amathontsi ombethe e-Aqua
Bekufuneka siqhwanyaze amatyeli aliqela kule kodwa iyinyani njani le? Uyilo lodonga olonwabisayo kunye nolutsha lubonisa amathontsi amanzi kwindawo eluhlaza okwesibhakabhaka kwaye iya kulunga kwigumbi lokuhlambela.
I-Aqua Dew Drops Wallpaper Mural, ukusuka kwi- £ 25.00 nge-m², kwiMurals Wallpaper
igumbi lokutyela elikhanyayo elikhanyayo
Iphepha lodonga lodonga 13Kaninzi '13Mhlophe
Ngelishwa ngekhe uzisongele ngayo, kodwa olu donga ludongeni lukhangeleka lushushu kwaye luyamema. Uyilo oluphefumlelweyo lokuloba umlobi ugqibelele kwabo bafuna ukufezekisa ukubonakala okumhlophe okwangoku.
I-White Knit Texture Wall Wall, ukusuka kwi- £ 25.00 nge-m², i-Murals Wallpaper
OkulandelayoUyisebenzisa kanjani imibala yelifa lemveli Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukuba babonelele ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
hamba unxibe ikhabethe
Izindlu zedepho yekhaya
I-ammonite farrow kunye nebhola